:: My Little World ::: Download files From IMEEM using FreeMusicZilla
Posted by Nay Nay Naing at 7/24/2008 10:20:00 AM
I think there's download limit in this software, ain't it?
Thursday, July 24, 2008 11:42:00 AM
ကျွန်တော် ဒေါင်းလုဒ်ကို seekmp3.info မှာလုပ်တယ် အခု zilla တော့မသုံးဘူးဘူး စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ် ကျေးဇူးပါ
mmhan >> Limit ရှိတာ သတိမထားလိုက်မိဘူး။ ကွန်မန့် ဖတ်ပြီး ပြန်ကြည့်မှာ ၁ ရက်ကို ၁၀ ဖိုင်ပဲ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ခုလို သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
Htoo Tay Zar >> ကျွန်မလည်း သီချင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ ဆို skreemr, Mp3gle, SeekMP3 ကို သုံးဖြစ်တယ်။ တခြား Google Search ကို သုံးပြီးလဲရှာဖြစ် ပါတယ်။ တွေ့ တာများပေမယ့်၊ တချို့ ရှားတဲ့ သီချင်းတွေ၊ သီချင်းဟောင်းတွေကို အဲ့ဒါတွေနဲ့ ရှာရင် mp3 မတွေ့ တာတွေလည်း ရှိတယ်။
နောက်ပိုင်း Search Engine တွေနဲ့သီချင်းရှာမရရင် Sharing Sites တွေက File တွေကို ဒေါင်းလုတ်ယူလို့ ရအောင် ကြိုးစားရင်း ဒါကို စမ်းဖြစ်သွားတာ။ ကျွန်မ အတွက် အတော်လေး အသုံးဝင်တယ်။ :)
How to convert to Mp3.
ကျွန်မ အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့reply ပြန်တာ နောက်ကျသွားတယ်။ sorry ပါပဲ။ FLV ကို MP3 ပြောင်းချင်တယ်ဆို ပြောင်းလို့ ရတဲ့ နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီဘလော့မှာ တစ်ခါရေးဖူးတဲ့ http://vixy.net/ ကို သုံးပြီး ပြောင်းပါတယ်။